२८ वर्षपछि ग्रामीण कच्ची सडक कालोपत्र गर्न शुरु
भदौ २७, तनहुँ । तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिका वडा नं १३ र १४ अन्तर्गत पर्ने गुँदीफच्याङ ग्रामीण कच्ची सडक २८ वर्षपछि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । सदरमुकाम दमौलीदेखि झण्डै १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न लागिएको हो ।
सो मार्गबाट व्यास नगरपालिका, बन्दिपुर गाउँपालिका हुँदै पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत डुम्रे बजार पुगिन्छ ।
सो सडकमा यसअघि ग्राबेल, नाला निर्माण र आवश्यक स्थानमा ह्युमपाइप राखेर यातायात सञ्चालन भएको थियो । विसं २०४८ पछि कच्चीमार्गको रुपमा सडक चलेपनि कालोपत्र नहुँदा वर्षामा हिलोले कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नगरपालिकाको वडा नं १४ केशवटारस्थित रुम्सी ढाक्रेस्वाँरा चोकदेखि आँपटोल डाँडासम्म करीब ६०० मिटर दूरी कालोपत्र गर्न थालिएको वडाध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशको समानीकरण बजेट व्यास नगरपालिकामार्फत आएपछि सडक कालोपत्र थालिएको हो । उनले भने, ‘कात्तिक मसान्तभित्र उक्त दूरीमा कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ रू. एक करोड २५ लाखको समानीकरण बजेट विनियोजन पश्चात कालोपत्र कार्य थालिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट उक्त मार्ग कालोपत्र गर्नका लागि गत वर्ष डेढ करोड र यसवर्ष सवा करोड विनियोजन गरेपनि टेण्डर नै नगराई काम रोकिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गतवर्ष र यसवर्ष बजेट विनियोजन गरी काम नगरेपछि स्थानीयवासी डेलिगेशन जाने तयारीमा जुटिरहेको उनले बताए । व्यास नगरपालिकाद्वारा विनियोजित रू. एक करोड बजेट रकमले दमौली बजारबाट केशबटार जाने सडक मार्गको पनि कालोपत्र कार्य थालिएको छ ।
दमौली–केशवटार गुदीफच्याङ मार्गको करीब १४ किलोमिटरमध्ये हालसम्म करीब ४ किलोमिटर सडक मार्ग कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । रासस
शनिवारसम्म देशभर वर्षा हुने